नयाँ प्रमुखआयुक्त नियुक्त भएसँगै आयुक्त जोशीद्वारा राजीनामा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले राजीनामा दिनुभएको छ । बुधबार आयुक्त डा. जोशीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाउनुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी गराएको छ ।
काठमाडौं, पुस ११ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार सम्बन्धित १० हजार भन्दाबढी उजुरी तामेलीमा राखेको छ । आयोगले केही दिनअघि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई बुझाएको ३०औं वार्षिक प्रतिवदेनमा ९ हजार
राष्ट्रपति समक्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश
काठमाडौं, पुस ९ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आयोजित समारोहमा वार्षिक
संवैधानिक परिषदद्वारा प्रेम राई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिश
काठमाडौं, पुष ५ । संवैधानक परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा पूर्व सचिव प्रेम राईलाई सिफारिश गरेको छ । संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधन